Hollow Cross Section Plate Die Series - Sina Hollow Cross Section Plate Die Series mpamatsy, Factory –Jwell
Ny takelaka poakaty PC dia ampiasaina be dia be amin'ny fananganana sy haingon-trano. Ny takelaka misy habaka maty sy ny feedblock dia afaka miaro ny UV amin'ny lafiny roa. Ny famokarana farany miaraka amin'ny sakany 2100mm ary misy fiantraikany lehibe, fanoherana ny toetr'andro ary fiarovana UV. Azo ovaina ambony sy ambany
molotra molotra, fametahana hatevin'ny famokarana dia azo fehezina ao anatin'ny 3%; Ny endri-javatra misy heater ao anatiny dia manome hafanana haingana sy fitazonana ny mari-pana ambony. Ny mpandamina ny rivotra tsirairay dia afaka manao ny haben'ny rivotra isaky ny faritra na dia mora fehezina aza mba hampitomboana ny kalitaon'ny vokatra.
ny fantsona dia mahatratra 0.015- 0.03um, izay miantoka ny porofo mikatso.
Ny famolavolana samihafa dia afaka mifanaraka amin'ny takiana samihafa amin'ny vokatra, takelaka poakaty polycarbonate ankapobeny izay ny hateviny dia eo anelanelan'ny 4 ka hatramin'ny 25mm, takelaka maro sosona toy ny faritra H-cross, fizarana X-cross sns, ny hatevin'ny sasany dia mety hahatratra 36mm, ary ny UV sosona azo mifono. Ny takelaka misy takelaka PP, PE hollow novokarin'ny maty manokana dia mavesatra lanja, mando ary manana tanjaka avo lenta, izay be mpampiasa amin'ny
tontonana fanaovana dokam-barotra, takelaka fampirantiana, boaty mitondra sns. Ny hatevin'ny halavany dia 2-12mm ary 1200-2200mm ny sakany.
Ny calibrator mandroaka mangatsiaka dia novokarina avy amin'ny fitaovana notsaboina manokana izay manome toky ny fanoherana ambony indrindra sy tsy misy endrika deformation. Fomba fanaraha-maso ny mari-pahaizana manokana momba ny mari-pana sy ny famolavolana ny vaksiny mamela ny fanitsiana ny mari-pana hahafeno ny fepetra ilaina amin'ny fananana ara-batana isan-karazany amin'ny fitaovana samihafa.